Google Yakawana Mazana eMakwikwi Mamiriro muLinux Kernel Uchishandisa KCSAN | Linux Vakapindwa muropa
Google yakawana mazana eRace Mamiriro muLinux Kernel uchishandisa KCSAN
Google mainjiniya izvo zvinopa kune Linux kernel vazivisa kuti vawana mazana e "Race Mamiriro", mune kernel vachishandisa KCSAN. Iyo kambani yagara ichishanda paAdressSanitizer kuti iwane zvikanganiso zvine chekuita nehuori hweyeuchidzo kana UndefinedBehaviorSanitizer yeisina kujekesa maitiro mune kodhi.
Panguva ino, Google inopa "Race Conditions" itsva detector yeLinux kernel inonzi KCSAN (Kernel Concurrency Sanitizer). Uku kunetseka kwakanyanya hakusi kutsva. Muchokwadi iyo Race Conditions inoitika kana maviri kana anopfuura tambo mune imwecheteyo nzira kuwana imwecheteyo memory nzvimbo panguva imwe chete, apo imwe yeinowanikwa ndeyekunyora, uye kana tambo dzikasashandisa chero akakiya chete kudzora kwavo kuwana kune ino ndangariro.
Kana zvimiro izvi zvasangana, odha yekuwana haisi yekufungidzira uye kuverenga kunogona kupa mhedzisiro dzakasiyana kubva kune kumhanya kuenda kune imwe zvichienderana neodha iyi.
Race Conditions iri kuramba ichionekwa seyekuwana pamwe zvikanganiso uye zvakaoma kutevedzera uye kuongorora muzvirongwa zvakafanana. Iyo Linux kernel iri hombe-chikamu software system, mune iyo tambo-yakasimba kuenzanisa uye isiri-yekumisikidza tambo yekuregedza iri zvakanyanya pasi pemakwikwi mamiriro.
Mamwe makwikwi mamiriro anogona kuve akanaka, asi mazhinji acho akaonekwa kusvika pari zvino anotorwa sekukanganisa.
Iyo Linux kernel inopa nzira dzinoverengeka dzekudzivirira uye kugadzirisa aya marudzi emamiriro Sezvo paine zvishandiso zvakaita seThread Analyzer kana KTSAN (Kernel Thread Sanitizer) kuona zvakakomba kuuraya zvikanganiso muLinux Kernel.
Zvisinei, Google, iyo inobatsirawo kune Linux kernel, ichangobva kukurudzirwa KCSAN, mutsva weRace Conditions detector yeKernel, yakafanana neKTSAN.
Sekureva kweGoogle, KCSAN inotarisa mukutsvaga mamiriro ekukwikwidzana mukodhi kernel. Iyi ine simba yakakosha hit detector ndiyo imwe nzira yeKernel Thread Sanitizer (KTSAN).
Sekutsanangurwa kweGoogle, KCSAN yakavakirwa pane sampling yekutarisa mapoinzi, kusiyana neKTSAN detector, inova yakakosha mujaho detector chiitiko chisati chaitika. Zvinokosha zvakakosha muKCSAN dhizaini kushomeka kwenhema positives, scalability, uye nyore.
KCSAN inoshandisa maturu ekubatanidza kuwana memory. KCSAN inoenderana neGCC uye Clang compilers. NeGCC, inoda vhezheni 7.3.0 kana gare gare uye neClang, inoda vhezheni 7.0.0 kana gare gare.
Pane iro peji reGitHub pejiMarco Elver weGoogle akanyora kuti vachishandisa KCSAN mumayedzo mwedzi wapfuura, vakawana mumazuva maviri chete anopfuura mazana matatu akasarudzika makwikwi emamiriro ezvinhu. KCSAN inopa akati wandei sarudzo dzekugadzirisa maitiro ayo.
“Tave tichishandisa KCSAN kuburikidza neSyzkaller kwemavhiki akati wandei, uye tawana tsikidzi dzakawanda. Pakutanga munaGunyana 2019, takaona makwikwi anopfuura mazana matatu emakwikwi mumazuva maviri chete, ”akanyora kudaro.
Google yakati maitiro ese akavakirwa paDataCollider, imwe inosimba detector yemakwikwi mamiriro mune kernel module. Asi kusiyana neDataCollider, KCSAN haishandisi mahodhi ekuongorora, panzvimbo pezvo inovimba nematuru ekubatanidza.
Iwo ekutarisisa mapoinzi anoshandiswa uchishandisa anoshanda encoding iyo inochengeta iyo mhando, saizi, uye yekuwana kero mune refu faira. Iwo mabhenefiti ekushandisa anochinjika ekutarisisa mapoinzi ari kutakurika uye kwakakura kuchinjika mukudzikisira kuwana iyo iyo yekutarisa poindi inogona kumisikidza.
Heano mamwe eakakosha mapoinzi akaitwa neKCSAN yeGoogle:
Kuita kwepamusoro: KCSAN nguva yekumhanya ishoma uye haidi yakagovaniswa nyika kukiya kune yega yega mukana Mhedzisiro yacho iri nani kuita pane KTSAN.
Hapana imwe ndangariro: maererano neGoogle, hapana cache inodiwa. Kuitwa kwazvino kunoshandisa diki diki yehurefu kukomberedza iyo yekutarisa poindi ruzivo, izvo zvisina basa.
Chiyeuchidzo kuraira: KCSAN haizive iyo Linux kernel memory modhi (LKMM) mitemo yekudzora. Izvi zvinogona kukonzeresa kumarudzi akaomarara akarasika (zvisirizvo zvisizvo) zvichienzaniswa neyekutanga-chiitiko chiitiko mujaho seKTSAN
Kururamisa: Sekureva kweGoogle, KCSAN haina kunyatsojeka nekuti inoshandisa zano rekuteedzera;
Inoda chirevo: chidiki chirevo chinodiwa kunze kweKCSAN nguva yekumhanya. Muchiitiko che pre-mamiriro chiitiko muteereri, chero kusiyiwa kunotungamira kune enhema positives, iyo inonyanya kukosha muchirevo che kernel iyo inosanganisira tsika dzenguva yekuteedzera.
Kuonekwa kwesimba kunonyora kubva kumidziyo: Nekutarisa kukosha kwemadata panguva yekumiswa kwewatchpoint, simba rinonyora kubva kumidziyo rinogona kuwanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yakawana mazana eRace Mamiriro muLinux Kernel uchishandisa KCSAN
Collapse OS inoshanda sisitimu. Usapererwe nekombuta kana apocalypse yarova
IBM inoshanda pamwe neCanonical kuti ipe masevhisi indasitiri yezvemari